आमा पाल्नलाई दाजुभाइको मु’द्धा, फैसला सुनाउन न्यायाधीशनै धुरुधुरु रोए……. – Jagaran Nepal
आमा पाल्नलाई दाजुभाइको मु’द्धा, फैसला सुनाउन न्यायाधीशनै धुरुधुरु रोए…….
अदालतमा एउटा मु’द्दा आयो , जुन मुद्दाले सबैको दिमाग हल्लाइ दियो। अदालतमा सम्पत्ति बिबाद र अन्य घरायसी बिबादित केसहरु आइ नै रहन्छन् । तर यो मुद्दा धेरै नै फरक किसिमको थियो । एक ७० बर्षको बृद्ध ब्यक्ती ले आफ्नो ८० बर्षिय दाइलाई अदालतमा मुद्दा दिएका थिए ।मुद्दामा यस्तो लेखिएको थियो कि , मेरो ८० बर्षको ठूलो दाजु , अब बृद्ध हुनुभयो । त्यसैले उ आफ्नो ख्याल पनि ठिक सँग ले राख्न सकेको छैन । तर मैले प्रतिबन्ध लगाउदा पनि दाइ हाम्रो ११० बर्षकी आमाको स्याहार सुसार गरिरहेका छन् । म अहिले ठिक छु त्यसैले अब मलाई आमाको सेवा गर्नको लागि मौका दिनुपर्छ । र आमालाई स्याहार सुसार गर्नको लागि मलाई जिम्मा लगाइयोस ।